Umkhiqizi wentengo kamakhisi kamatilasi weSprocker Rayson
Ukuthembela kubuchwepheshe obuthuthukisiwe, amakhono amahle okukhiqiza, kanye nensizakalo ephelele, iRayson ihola embonini manje futhi isakaza iRayson yethu emhlabeni wonke. Ngokubambisana nemikhiqizo yethu, izinsizakalo zethu nazo zinikezwa njengezinga eliphakeme kakhulu. I-Pocket Spring Matristress Intengo enikelwe kakhulu ekuthuthukisweni komkhiqizo kanye nokuthuthukiswa kwekhwalithi yesevisi, sisungule idumela eliphakeme ezimakethe. Sithembisa ukuhlinzeka wonke amakhasimende emhlabeni wonke ngensizakalo esheshayo nezobuchwepheshe emboza ukuthengisa kwangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa, nangemva kokuthengisa. Akunandaba ukuthi ukuphi noma yiliphi ibhizinisi olibandakanyekile kulo, sithanda ukukusiza ubhekane nanoma yiluphi udaba. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi ngentengo yethu entsha ephaketheni yasentwasahlobo yasentwasahlobo noma inkampani yethu, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.Umkhiqizo ungahlala uyisimo esihle. Inokuwalana okuhle okwenza kubukeke kuqondile njengoba nje kukhule.